धरान उपमहानगरपालिकामा भारी मतले विजयी हुनुभएका मेयर मेयर तारा सुब्बा अहिले हामीबीच हुनुहुन्न । अब हामी बीचमा उहाँको भौतीक शरीर नभएपनि उहाँले गर्नुभएका यो धरान प्रति धराने जनताहरुका लागी उहाँले गर्नुभएको दिर्घकालिन योजनाहरु, उहाँले गर्नुभएका योगदानहरु हामीबीचमा स्मरणमा छन् । ती स्मरणहरुलाई चीर स्थायी बनाउनकालागी जुन अमुल्य योगदान गर्नुभएको छ । म यो समारोहको बीचमा स्व. मेयरसाप प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै हामीले यो कृति उहाँले राख्नुभएको धराने जनता प्रति राख्नुभएको कृति, नेपाल नेपाली बामपन्थी आन्दोलनमा पु¥याउनुभएको योगदानको कृति, समग्र देशकै लागी पुगेको क्षतिको चीर स्थायि स्मरण रहोस् भनेर हामीले कृति प्रकाशन गरेका हौ । यो कृति प्रकाशन गर्ने क्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट मुखको भरमा आजका प्रमुख अतिथी देशकै उप्रधानमन्त्री ज्यूले मैले मुखले फोन गरेकै भरमा तारा सुब्बाको स्मृतिमा लेख उपलब्ध गराउनु भयो । सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद् ज्यूहरुबाट जुन अत्यन्तै छोटो समयमा साथ पायौ । यसका लागी धरान उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछु ।
हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीले केही महत्वपूर्ण र गरिमामय निर्णय गरेका थियौ । ती निर्णयहरुले धराने जनताहरुको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने, धरानको विकासका लागी केही महत्वपूर्ण कदमहरु चालिरहेका थियौ । तर बिचमा नै मेयरसाप वित्नुभयो । ग्राण्डी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मेयरसापलाई ब्लडको आवश्यकता परेको रहेछ । संयोगवस मेरो र मेयरसापको ब्लड ग्रुप मिल्ने रहेछ । ब्लड खोजी गरिरहदा म आफै ब्लड दिन तयार भए । मैले २ वर्षदेखि ब्लड डोनेशन गरेको थिइन । त्यही दिन संयोग मिल्यो मेयरसापलाई ब्लड डोनेशन गर्ने अवसर पाए । दुःखको कुरा त्यो रगत काम लागेन । मेयरसापलाई बचाउन सकिएन । मेयरसाप मैले हजुरका लागी रक्तदान गरेको छु । हजुरलाई चाडै निको हुन्छ । भित्र आइसियुमा हुनुहुन्थ्यो बाहिरबाट मात्रै बोल्न पाइन्थ्यो । मेयरसापलाई मैले सोधे मेयरसाप मलाई भन्नुपर्ने कुरा केही छ । केही छ भने म भोली फर्कन्छु भनेपछि मेयरसापले ‘गर्नु त कति थियो थियो नि तर मैले यहाँबाट निस्कन पाइन भन्नुभयो । गर्नुपर्ने त धेरै कुरा त के के थियो थियो नि † अहिले यहाँबाट मलाई बाहिर सार्न पाए म धेरै कुरा शेयर गर्ने थिए । अहिले म केही भन्न सक्दिन तपाईले नै सबै कुरा गर्नुस् है ।’ भन्नुभयो । मेयर सापले मलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।
त्यो जिम्मेवारी सम्हानका लागी जुन हामीले गरेका निर्णयहरु छन् । ति निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागी जुन महत्वपूर्ण निर्णय छ । धरान उपमहानगरपालिकाका १२ हजार सुकुम्बासीलाई व्यवसथापन गर्ने निर्णय ७५३ वटै स्थानीय तहमा कसैले सुरुवात गरेको छैन, त्यो धरानले गरेको छ । संस्थागत ढंगबाट नै प्रकृया अघि बढेको छ । यसको कार्यविधि नगर कार्यपालिका र नगरसभाले बनाएको छ । मलाई लाग्छ हामीले बनाएको आधारमा नेपाल सरकारले सुकुम्बासी आयोग निर्माण गर्ने हो भने त्यो हामीले बनाएको आधार महत्वपूर्ण बन्ने छ उदहरणीय बन्नेछ ।
त्यस्तै गरी स्व. तारा सुब्बाले गर्नुभएको महत्वपूर्ण निर्णय भनेको खानेपानीको व्यवस्थापनको लागी एउटा परियोजना एसियाली विकास बैंक, नेपाल सरकार र धरान उपमहानगरपालिकाको लगानीमा हुन लागेको यो खानेपानी आयोजना, जुन सम्पन्न हुन लागीरहेको छ । अब धराने जनताले पहिलाको जस्तो हाहाकार हुन पर्दैन । त्यसको लागी क्याबिनेट निर्णय भइसकेको छ । सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दा पनि फैसला भइसकेको छ । हामीले गरेको कन्ट्याक्टरलाई तिमिले तुरुन्त धराने जनतालाई डिजाइन अनुसार नै खानेपानी खुवाउनुपर्छ भनेका छौ । उनीहरुले पानी खुवाई सकेपछि मात्रै हामीले त्यो परियोजना ह्याण्डओभर लिने हो । अब हामी तुरुन्तै खानेपानी सहज गराउन आपूर्ती गराउन लागिरहेको कुरा जानकारी गराउँदछु । त्यस्तै गरी स्व. तारा सुब्बाको अगुवाईमा गरेको पहिलो निर्णय जुन बसपार्क निर्माणको निर्णय, त्यहाँ मलाई विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । अहिले त्यहा विवाद समाधान भइसकेको छ । अहिले दुवैपक्षका विचमा सम्झौता भएर डिपिआरको लागी अघि बढेको योजना डिपिआर समेत बनिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारको सहकार्यमा स्मार्ट बसपार्क बनाएर प्रदेशकै नमुना बसपार्क निर्माण गर्ने चरणमा पुगिसकेका छौ । अहिले हामीले संयुक्त शिलान्यास गरेको फोहोर व्यवस्थापनको नेपालमै नमुना बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेर सञ्चालनको लागी अन्तिम तयारीमा हामी जुटिरहेका छौ । हामी निर्वाचित भएको बेलामा खहरे करिडोरले दुःख दिएको थियो । हामीले खहरे करिडोरको व्यवस्थापनमा डटेर लाग्यौ, अहिले खहरेले दुःख दिएको छैन । यो वर्ष पनि खहरे करिडोर निर्माणमा लागेका छौ । सेउती सर्दुले दिएको दुःख र त्यो क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाको त्रासदीपूर्ण अवस्थाको अब अन्त्य हुदैछ । त्यसका लागी सहरी विकास मन्त्रालयबाट करिडोर निर्माणका लागी ठेक्का प्रकृया अघि बढेको छ । यसले गर्दा धरान सुरक्षित सहरको रुपमा विकास हुँदै गइरहेको छ ।
हाम्रो सहरलाई पर्यटकिय सहर बनाउने भनेर लागिरहेका छौ हामी । प्रदेश सरकारले पनि धरानलाई पर्यटनको केन्द्र मानेर जुन बजेट छुट्याएको छ यसका लागी प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । हामीले यो धरानको चिनारी पनि देश विदेशमा होस् भनेर गन्तव्य पुस्तिका बनाएका छौं । देश विदेशमा चिनारी गराइरहेका छौ । पर्यटन बोर्डले काठमाडौ र पोखरा अनि चितवनलाई मात्र पर्यटकिय क्षेत्र मानिरहेको अवस्थामा अबदेखि धरानलाई पनि पर्यटकिय सहर मानेको छ । इष्ट टुरिजम मार्ट यही धरानमा गर्न गइरहेका छौ ।
धरानको ऐतिहासिक ट्रेलहरु पहिचान गरी संस्थागत रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छौ । विजयपुर गढी, सागुरीगढी, सुलिकोट लगायतका देविथान गढीलाई संरक्षण गरी युनिफिकेसन ट्रेल निर्माण गर्न माननिय रक्षामन्त्रीसँग समेत सहकार्य गरिने भएको छ । विभिन्न स्थानमा होमस्टे निर्माण गरेका छौ । हामी निर्वाचित भए आउँदा यो नगरको वार्षिक आम्दानी ८ करोड मात्रै थियो अहिले हामीले यसलाई बढाएर १८ करोड बढी पु¥याएका छौ । धरानको नगर गौरबको योजना भनेर हामीले विभिन्न योजनामा बजेट विनियोजन गरेका छौ । प्रदेश सरकार र संघिय सरकारसँग सहकार्य गर्ने गरी योजनाहरु अघि बढाइरहेका छौ । यही आर्थिक वर्ष धरानलाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्दैछौ । यी कार्यहरु सम्पन्न गरिसकेपछि मात्रै स्व. मेयरसापको स्मररण चीर स्थायी हुनेछ । उहाँले अघि सार्नुभएका योजनाहरु पुरा गर्ने संकल्प पर्छु । स्व. मेयर तारा सुब्बा प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।
(मंगलबार धरानमा भएको तारा सुब्बा स्मृति ग्रन्थ विमोचन कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारीले गरेको सम्बोधनको सम्पादीत अंश ।)